Badweyntimes.com » XOG-Madaxweyne Farmaajo oo Wakiilada Beesha Caalamka ku soo rogay Amar lama filaan ku noqdayBadweyntimes.com
XOG-Madaxweyne Farmaajo oo Wakiilada Beesha Caalamka ku soo rogay Amar lama filaan ku noqday
Madaxweynaha la doortay Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa uga digay wakiilada beesha Caalamka iyo Safiirada inaysan gacan dhaafin Dowladdiisa oo aysan tagi karin xarumaha Maamul Goboleedyada iyagoo aysan amar ka haysanin Dowladdiisa.
Hadalkan ayuu Farmaajo ugu sheegay wakiilada Beesha Caalamka kulan ay shalay labada dhinac ku yeeshan Magaalada Muqdisho.
Marka laga soo tago ka hadalka is bedelka dhacay iyo natiijada doorashada Madaxweyne Farmaajo ayaa ku canaantay Wakiilada Beesha Caalamka inay dhaqan iyo caadi ka dhigteen inay garab maraan dowladda sharciga isla markaana ula dhaqmaan dadka soomaaliyed inay yihiin dowladdo tiro badan.
“Ma aqabalayo hab dhaqankiina hore oo ahaa inaad toos ula xiriirtan Madaxda Maamul Goboleedyada, inaad garab martaan dowladda sharciga”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo oo si adag ula hadlay wakiilada beesha Caalamka.
Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa u sheegay wakiilada Beesha Caalamka oo ka mid ahaa Wakiilka Qaramada Midoobay iyo Safiirada dalalka kale inuu magacabi doono guddi gaar ah oo la soconaya dhaqdhaqaaqyada Xafiisyada beesha Caalamka iyo haddii ay meel uga dhacaan dowladnimada soomaaliya.
“Diblomaasiyiin ayaa tihiin waxaad leedihiin xeer iyo nidaam caalami ah oo diblomaasiyiinta marka ay dalal shisheeye joogan lagula dhaqmo, waxaa xaqiiq ah inaad soomaaliya ku xadgudubtaan marka ma aqabli karo inaan fiirsado nidaamkii hore ee aad soomaalida kula dhaqmayseen”ayuu yiri Mr Farmaajo.
Haddii hadalkiisa ka dhabeeyo Madaxweynaha soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo waxaa hubaal ah in dowladdiisa ay noqonayso mid adag oo shaqeysa kana guuleysata faragelinta joogtada noqotay ee wakiilada beesha caalamka.
Mid ka mid ah Saraakiisha Farmaajo ee kulankaas ka qeybgalay ayaa ka soo xiganay in markii uu hadalkaas jeediyay Wakiilada Beesha Caalamka is fiir fiiriyan hase yeeshe waxay si taxadir leh u soo dhaweeyan hadalka Madaxweynaha.
Donald Trump oo U Muuqda inuu ku fashilmo amarkii 7da dal ee ay ku jirto Somalia
Dhageyso: FARMAAJO oo shaaciyay Waxa uu qaban doono 100-ka Maalmood ee ugu horeeya..